Hlola i-Ibiza, Spain - World Tourism Portal
Hlola i-Ibiza, Spain
Yini okufanele uyibone, Okuphezulu kakhulu okusikisela e-Ibiza, eSpain
Okufanele ukwenze e-Ibiza
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Ibiza
Bukela ividiyo emayelana ne-Ibiza
I-Ibiza ingesinye seziqhingi zaseBalearic. Ubude obukhulu besiqhingi ngomgwaqo omkhulu yi-42 km.
Hlola i-Ibiza nemizi yayo:
I-Formentera- umakhelwane wasendaweni ethule nesiqhingi esingasasebenzi sakha amanye amanzi ahlanzekile, acwebe kakhulu eMedithera, kanye nokuhamba ngesikebhe esihle lapho.
I-Ibiza ne-Formentera baziwa nangokuthi i- "Islas Pitiusas" ngenxa yobuningi bamaphayini amboza ubume bawo. I-Ibiza ne-Formentera bayikhaya lezakhamizi ezi-111,200.
Yize iBalearic Catalan ilulimi olusemthethweni kweziQhingi zaseBalearic, futhi zonke izikhala zezimpawu njll zikhulunywa ngesiCatalan, isiCastilian (iSpanish) siwulimi olusemqoka kwalesi siqhingi, kanti iningi labomdabu likhuluma isiNgisi noma isiJalimane. IsiNgisi siyaqondakala kabanzi kuso sonke isiqhingi, futhi ungasithola ngolwazi oluyisisekelo lweSpanish uma ufisa ukwenza umzamo omncane
Ibiza Town idolobha ngaphakathi Spain futhi ligcwele isimilo, inhliziyo, umphefumulo, umoya nomlando. Akukhona kuphela ukuthi iyikhaya lesiza sohlu oluhle lwe-UNESCO World Heritage elibhalwe nge-Dalt Vila - inqaba enkulu ebiyelwe ngodonga ezungeze idolobha lomgwaqo elibiyelwe. Yindawo futhi lapho isenzo sasebusuku sonke sikhwela khona ngobuningi bemigoqo kanye nezindawo zokudlela ezisendaweni ethekwini. Emini isethi yezindiza, izinhlobo zama-yachting nama-VIPs ahlala ezungeze indawo epholile yaseMarina Botafoch futhi ukuhamba nje ibanga elide kunamabhishi amahle, abekwe emuva. Umlando waseMedithera, izakhiwo zasendulo, izindawo zasolwandle ezinhle ngokumangalisayo nendawo yesehlakalo yasebusuku yendawo yonke yahlangana endaweni eyodwa eyingqayizivele.
IBaluard de Sant Jaume, Dalt Vila. I-10am-2pm & 6pm-9pm. Izandla ezimangalisayo ekubonisweni kobuchwepheshe bezempi be-XVIth kuya emakhulwini eminyaka we-XVIIIth. Gqoka izembatho zempi, amabhola e-heft cannon, imigqa yomlilo. Kwenziwe kahle!
Ukuthenga kuyisikhuthazo esivakashele izivakashi kulesi siqhingi ngoba i-Ibiza inezindawo ezinkulu zokuthenga. Izivakashi ziyamangala ukuthola imfashini ejwayelekile yase-Ibizan enikezwe igama elithi Adlib fashion futhi itholakala zombili ezindaweni zokuthenga nasezimakethe zomgwaqo. Indawo yezitolo ethandwa kakhulu isethwe echwebeni lase-Ibiza, lapho zingatholakala khona zonke izinhlobo zamalebula ezinhlobonhlobo zokuqamba.
Kumvini, uHola Hola (uMercat Vell) uyindawo; kwezingcezu ezenziwe-in-Ibiza eyodwa, i-Kurru Kurru (Plaza del Parque) neLoyandford eWhite Horse Boutique (Calle de la Cruz); amalebula wokuqamba, iRevolver (Calle Bisbe Azara), uGaly (Isidoro Macabich) noMayurka (Vara de Rey no-Avinguda Ignasi Wallis) bangumthombo wami ongapheli wokuphefumlelwa kwemfashini. Uma ungumlutha wasemgwaqweni ophakeme, uzothanda uMango, uBlanco, uStradivarius (impendulo ka-Ibiza kuTopshop) ne-Spanish mega-brand Zara (yabesifazane, abesilisa nezingane). Ngobusuku kakhulu, umucu odumile wesitabane waseCalle de la Virgen uphila ngezindawo zokuzithokozisa ezijabulisayo (zabesilisa nabesifazane), izitolo zobulili ezi-quirky nakho konke okuphakathi.
Ukuqasha imoto kwi-Ibiza kulula uma nje ungakhombisa ilayisense lakho lokushayela. Ezinyangeni zasehlobo zikaJulayi no-Agasti ukuqasha imoto kungaba nzima ngenxa yesidingo esikhulu, kungcono ukubhuka kusenesikhathi. Amanani okuqashwa kwezimoto ancintisana kakhulu.
Izikebhe - Ukuhamba ngomkhumbi futhi kuyindlela ethandwa kakhulu yokubuka isiqhingi sase-Ibiza njengoba ugu lolwandle lunemihume eminingi ecashile efihlekile kanye nezindlela zokuhamba zodwa ezifanele ukuvakashelwa. Uma ufuna ukuvakashela i-Formentera kuzodingeka uthenge ithikithi lesikebhe noma uthole i-charter yesikebhe noma i-yacht. Kunezindawo ezimbalwa lapho ungaqasha khona isikebhe noma i-yacht izinsuku ezimbalwa, noma kunjalo, eziningi zidinga ilayisense lesikebhe noma ungaqasha uSkipper wendawo, ozokuqondisa ezindaweni ezinhle ngesikebhe.
Ukuhamba - amadolobha mancane ngokwanele ukuba angadingi i-enomning motor
IJet Ski - Enye indlela yokuvakashela amabhishi athandwa kakhulu ukuqasha i-jet ski noma ukuthatha uhambo lweJet Ski oluya e-Es Vedra Island.
Okufanele ukubone, Okuphambili okuphezulu kakhulu e-Ibiza, Spain
I-Es Vedra, idwala eliyinqaba yesiqhingi ngasogwini olusentshonalanga lwe-Ibiza.
I-Atlantis, isifiso esifihlekile, kepha kuphela uma ungathola umuntu wendawo ozokutshela indawo yakhe eyimfihlo.
Amafonti we-Passeig de ses in San Antonio.
Ingxenye yakudala ye-Ibiza Town.
Vakashela i-Formentera eseduze ngesikebhe.
Hlola amabhishi amaningi ogwini lonke.
Imakethe edumile ye-Es Canar Hippy (ebanjwa kuphela ngoLwesithathu) ogwini olusempumalanga yesiqhingi kanye neMakethe yeLas Dalias Hippie eSan Carlos ngemiGqibelo.
Vakashela iBar Anita eSan Carlos, okuyindawo yomlando lapho abaculi nababhali bama50s, ama-60 nama70s babevame ukuqoqa amasheke abo bese beyeka ukuphuza.
Vakashela uCova de Can Marçà ePuerto de San Miguel, imihume yemvelo enkulu kunazo zonke e-Ibiza. Kumele ku-Ibiza.
Ibhishi elihle elihlala ngaphandle nje kwendawo enkulu yedolobha. Intsha eningi izobonwa iqoqana ukukhokhela izindlu eziqashisayo nsuku zonke ezihlalweni zasolwandle, futhi ama-hawkers ahlola ulwandle efuna abantu abadala abancane ukuba baye ekilabhini yabo abazikhethele yona.
Hlola ezinye zezindawo zemvelo zesiqhingi esihle abantu abambalwa abazinika isikhathi sokuzijabulisa.
Thatha isikebhe noma uye parasailing.
Funda iSpanish kwezinye zezikole zolimi eziseduze nesiqhingi. Ezinye zazo zenzelwe ukufundisa iSpanish njengolimi lwakwelinye izwe. Iningi lazo lisedolobheni lase-Ibiza, lapho futhi uzokwazi ukusebenzisa ulwazi lwakho ngendlela engcono kakhulu futhi kuzoba lula ukuhlala emahostela eduze kwesikole.
Bamba iqhaza kwi-Professional Photoshoot yakho.
Hlola umkhosi wecala oseceleni. Amakhulu abantu bendawo athuthela esitayeleni se-carnival sokudla okusha, okuhogelayo, namathokheni enziwe ngekhwalithi.
Zama izinzipho ezenziwe ngesandla zikanokusho eziphonsa iphunga elimnandi emoyeni.
Ngesikhathi semikhosi yangaphambili yasolwandle, abathengisi banikela ngezimpahla eziningi.
Izitolo eziningi ziyaphila ngemibala namaphethini.
Ngaphezu kokuthandwa nokunambitheka okumangalisayo, kunesici esibonakalayo esiqinile emikhosini. I-charmer yenyoka ibonwa ihola indondo encane enqamula ezindaweni ezihlukile zokukhothoza nokwesaba kwezingane ezincane yonke indawo.
Uma unentshisekelo kubhiya wezandla, vakashela i-Ibizaim Brewhouse yokuqala ye-Ibiza e-Port des Torrent
Ungakhohlwa ukuzama amakhono amabili endawo: i-ensaimada, uhlobo lwenhlanganisela ethambile, ethambile - ukuthi ikhekhe laseDenmark laliyoba njani uma lifana ne-donut - ne-flao, ushizi omnandi no-mint flan. Ama-pastelerias amaningi nemigoqo eminingi athengisa i-ensaimada - i-flao kunzima kakhulu ukulandelela phansi.
Kukhona futhi izindawo zokudlela / izitolo zokudlela ezisheshayo eSan Antonio nase-Ibiza Town uma usuthande ukudla okusheshayo ohambeni.
I-Ibiza idume ngokuphila kwayo ebusuku. Emini izivakashi eziningi zithola imisebe kwelinye lamabhishi amahle noma zilala eziphuzweni zobusuku ezedlule. Amabha awahlali ematasa e-Ibiza edolobheni noma eSan Antonio kuze kube kusihlwa, cishe nge-7PM.
Cishe yonke imigoqo, ikakhulukazi ezinyangeni ezigcwele kakhulu zasehlobo, ine "isiphuzo esinqunyiwe" esizokhangiswa (kufana ne-hawk) emgwaqweni ongaphandle kwebha. Lezi izinketho ezinhle zokonga imali endaweni ethile ebiza kakhulu.
IWest End, eduze kwaseSan Antonio isikhungo, iyitaladi ende, ebanzi egcwele imigoqo kanye nabazithobayo. Iphathi liyazivalekela ngase-3 noma 4AM lapha.
I-Ibiza yaziwa kakhulu ngamakilabhu ayo amakhulu. Amakilabhu e-Ibiza aheha abanye boDJ abahamba phambili emhlabeni abadlala 'ukuhlala' masonto onke ngobusuku obuthile.